Taariikhda iyo Astaamaha lagu garto Roman Colosseum | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Meelaha Dalxiiska loo tago, Getaways Yurub, General, Italia
Waxaa jira meelo ay tahay inaad aragto ugu yaraan hal mar noloshaada, iyo Rome Coliseum Iyadu waa mid ka mid ah. Shaqo naqshad dhisme ah oo taagnayd qiyaastii laba kun oo sano oo ay ku taal taariikh aad u ballaadhan oo xiiso leh, taas oo lagu soo bandhigay filimo iyo dokumentiyo badan, sidaa darteed ma noqon doono qof shisheeye ah Si kastaba ha noqotee, hubaal waxaa jira waxyaabo badan oo aadan ka ogeyn taalladaan Talyaani.
Kolosayumkan, oo sidoo kale loo yaqaan Flavian Amphitheater, dhismuhu wuxuu bilaabmay 70 AD. C. oo hoos timaadda amarka Vespasiano, halkaas oo ahayd harada Nerón. Waxaa jira mala awaal badan oo ku saabsan sababta dhismihiisa, waxaana loo maleynayaa inay noqon karto shaqo guul kadib guushii Roomaanka, laakiin sidoo kale in la doonayay in lagu laabto Rome aag uu Nero shaqsiyan u adeegsaday inuu abuuro degenaanshaha, Domus Aurea. Ma rabtaa inaad wax ka ogaato faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan Roman Colosseum?
1 Taariikhda iyo xiisaha
2 Qaab dhismeedka Kolosseum
3 Kolosseum maanta
Taariikhda iyo xiisaha
Ku kalsoonaanta taariikhda guud ee Colosseum waxay nagu qaadan doontaa saacado, in kasta oo ay runtii tahay wax aad u xiiso badan. Dhismihiisu wuxuu bilaabmayaa 70s iyo 72s d. C. oo magaceeda hadda jira uu ka yimid Colossus of Nero, Taallo ka agdhow oo aan maanta la keydin. Badanaa waxaa laga dhisay Domus Aurea, iyadoo laga buuxiyo harada Nero ciid. Waxaa lagu dhammeeyay amarkii Emperor Titus, sanadkii 80 AD Waxaa jira waxyaabo badan oo xiiso leh oo ku saabsan Kolosseum-kan, sidaa darteed waxaan isku dayi doonaa inaan soo helno qaar ka mid ah.
Kolosiyamkan waxaa ka jiray awood 12.000 oo qof oo leh 80 saf oo taagnaansho ah. Muhiimadda daawadayaashu waxay ka soo bilaabeen xagga hoose, iyadoo kuwa ugu taajirsan uguna awoodda badan Rome ay salka ku hayaan, sida Imbaraadoorka, senetarrada, garsoorayaasha ama wadaaddada. Jaranjarada kore waxaa ku noolaa Roomaankii ugu faqiirsanaa, xaalad aad uga liita xagga bulshada inteeda kale. Gudaha gudaheeda bandhigyo badan ayaa laga sameeyay, kan ugu caansan dagaalyahan gladiator. Waxaa sidoo kale jiray dagaallo lala galay xayawaannada, xukunnada dilka ah ee dadweynaha, dib-u-soo nooleynta dagaalladii, riwaayadaha laga soo qaatay hal-ku-dhigga qadiimiga ah ama naumaquias, oo ah dagaalka badda. Waxaa la rumaysan yahay in bilowgiisii ​​qaybta hoose ay ka buuxsameen biyo si ay u fuliyaan dagaalladan.
Kolosayumkan waxaa la daahfuray 80 AD. C., waxayna ahayd madadaalada ugu weyn, oo leh dabaaldeg soconayay 100 maalmood. Ciyaarihii ugu dambeeyay waxaa lagu qaban lahaa qarnigii XNUMX-aad, wixii ka dambeeya taariikhda Boqortooyada Roomaanka loo arko inay dhammaatay. Markii dambe, dhismahan wuxuu lahaa adeegsiyo dhowr ah, maadaama ay ahayd magangal, warshad iyo dhagax-tuur. Ugu dambayntii waxaa loo adeegsaday sidii xarun cibaado oo masiixi ah, sidaa darteed waxay ku guuleysatay inay is badbaadiso ilaa maanta, maaddaama dhagxaan badan oo ka mid ah loo isticmaalay in lagu dhiso dhismayaasha cusub ee magaalada. Waqtigan xaadirka ah dib ayaa loo soo celiyey qaybo ka mid ah iyo alwaaxdii alwaaxda ahayd ee ciiddu ahayd lama ilaaliyo, markaa qaybta hoose waa la arki karaa, laakiin waa mid ka mid ah shaqooyinka waaweyn ee boqortooyadan la waayey.
Qaab dhismeedka Kolosseum
Qaab dhismeedka amphitheater-ku wuxuu ahaa wax gebi ahaanba cusub, maadaama uu ahaa kii ugu weynaa ee la sameeyo. Gudaha ayay ku jireen ciidda iyo hypogeum-ka. Fagaaraha waa garoonka lagu ciyaaro, oval leh sagxad alwaax ah oo lagu daboolay ciid, halkaas oo bandhigyada lagu qabtay. Aagga hypogeum waa dhulka hoostiisa oo leh godad iyo godad ay kujiraan kuwa wax dila, kuwa la xukumay iyo xayawaanaadka la dejiyay ilaa ay ka soo baxaan fagaaraha. Aaggan wuxuu lahaa nidaam bullaacad oo weyn si looga baxo biyaha, waxaa loo maleynayay in kadib marki ciidamada badda ay soo bandhigeen Naumaquia. Aagga Cávea waa kan tarabuunka, oo leh masraxa, halkaasoo la dhigay jilayaasha ugu caansan.
Qeyb kale oo layaab leh xitaa maanta waa waxa loogu yeero matag, kuwaas oo ah jidadka laga soo maro marinnada laga soo galo Koloseum. Waxay u oggolaadeen dad aad u tiro badan inay ku baxaan muddo gaaban, si qiyaastii 50.000 oo qof looga daad gureeyo illaa shan daqiiqo. Garoomo badan ayaa maanta awoodi waayey inay isbarbar dhigaan shaqooyinkan iyo shaqadooda weyn.
Aagga bannaanka waxaan ka aragnaa a facade afarta dabaq is dul saaran, oo leh tiirar iyo qaansoley, iyo aag sare oo xiran. Tani waxay siineysaa amphitheater muuqaal aad u fudud. Heer kasta waxaad ku arkeysaa qaab kale, wax caan ku ahaa dhismayaal badan oo xilligaas jiray. Waxay adeegsadaan qaababka Tuscan, Ionic iyo Corinthian, midka korena waxay ugu yeeraan iskudhaf.
Soo kicinta Waa qayb kale oo aan hadda la ilaalin, waana inay tahay maro maryo ah oo la geeyay si dadweynaha looga ilaaliyo qorraxda. Ulaha ka sameysan alwaax iyo maro ayaa la adeegsaday, markii hore waxaa laga sameeyay shiraac, markii dambena waxaa laga sameeyay linenka oo aad uga fudud. Waxaa jiray wadar ahaan 250 mas oo loo isticmaali karo si gooni gooni ah si loo daboolo kaliya qaybo ka mid ah haddii loo baahdo.
Maanta, Roman Colosseum waa mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan magaalada Taliyaaniga. 1980-kii ayay UNESCO ku dhawaaqday inay tahay Goob Hidaha Dunida, bishii Luulyo 2007-na waxaa loo aqoonsaday inay ka mid tahay Toddoba Layaab Oo Cusub Dunida Casriga Ah.
Waqtigaan soojiidashada waa la bixiyaa, si aad u aragtana waxaa fiican inaad noqoto waxa ugu horeeya subaxa inaad awoodid inaad tikidh hesho sida ugu dhakhsaha badan. Wuxuu furmayaa 8.30:12 subaxnimo maalin kasta tikidhada dadka waaweyna waa XNUMX euro. Hab kale oo lagu helo tigidhka waa in la adeegsado marinka Roma, Kaar si aad u hesho qiimo dhimis meelaha soojiidashada kala duwan iyo taallo ku taal magaalada, sidoo kalena ka fogaanaya in saf loo galo
Gudaha Kolosseum gudaheeda waxaad ku qaadan kartaa safarro hagitaan ah, dabaqa korena waxaa ku yaal matxaf loo qoondeeyey ilaahkii Griigga ee Eros. Mid ka mid ah dhacdooyinka la xiriira Colosseum ayaa ah socodsiinta Jidka Pope ee Iskutallaabta Jimcaha Wanaagsan sanad walba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Italia » Taariikhda iyo Astaamaha Roman Colosseum
Kan ugu fiican koonfurta Argentina
Maxaa lagu arkaa Liechtenstein